Dib-u-eegid: 'Biyaha Madoow: Abyss' Flounders In The Dark - iHorror
Bogga ugu weyn Warar Naxdin Leh Dib-u-eegid: 'Biyaha Madoow: Godka' Abyss 'Muddada Mugdiga ah
Dib-u-eegid: 'Biyaha Madoow: Godka' Abyss 'Muddada Mugdiga ah
Waxaa jira wax uun oo ku saabsan xayawaanka ugaadha iyo masiibooyinka dabiiciga ah ee runtii ku dhaca neerfaha maskaxda asaasiga ah. Noocyada Aasa, waxaan u gudubnay heer aan ka walwalin wax naga sarreeya silsiladda cuntada oo qaniinyada naga saarta. Laakiin weli, cabsida ayaa weli ah. Taas oo sidoo kale sharraxaysa sababta dhacdooyinka nolosha dhabta ah ee weerarada xayawaanku ay yihiin kuwo war-bixin ah. Mar kasta oo orso ama libaax badeed weeraraan qof, taasi waa cinwaan. Sidii xaalku ahaa markay ahayd 2003 markii saddex dhalinyaro ah ay u baxeen dhinaca woqooyiga Australiya oo ay is arkeen yaxaas xanaaq badan. Tani waxay saldhig u ahayd filimkii 2007, Biyaha madow. Hadda, qaar ka mid ah 13 sano ka dib, taxane ka soo baxa dibedda ayaa leh Biyaha Madow: Abyss.
Dib ugu noqoshada Waqooyiga Australia, Jennifer (Jessica McNamee) ayaa ku dhiirrigelisay saaxiibkeed geesinimada leh Eric (Luke Mitchell) iyo asxaabteeda Yolanda, Viktor, iyo Cash (Amali Golden, Benjamin Hoetjes, Anthony J. Sharpe) waxay go'aansadeen inay ku biiraan kooxda cidlada. Ku soo degaya nidaam godad cusub oo la sameeyay oo umuuqda lama taabtaan. Sida nasiib darradu u dhici lahayd, duufaan ayaa ku soo dhacaya, oo daadadka ka dhigaya godadka oo isku shaabadeeya. Haddayna taasi ahayn wax xun, waxay leeyihiin marti aad u gaajaysan oo xayawaan ah oo ay wax ka qabtaan.
Sawir ahaan IMDB
Agaasime Andrew Traucki ayaa si wada jir ah u agaasimay sheekada asalka u ah badbaadada yaxaaska Biyaha madow oo ay ka shaqeeyeen xayawaanka la midka ah ee halista ah ee Reef oo ay kujiraan dabbaashayaasha iyo shark. Hadda, keligiis ayuu ku soo noqonayaa, wuxuu dib ugu noqday xididdadiisa taxanaha ruuxi ah. Nasiib darro inkasta oo ay suuragal tahay dejinta iyo dhagarta iyo argagaxa weligiis ee yaxaasyada, filimku maahan mid xiiso leh. Kadib aflaamta sida Gurguurto iyo 47 Mitir Hoose taasi waxay ku guuleysatay inay kor u qaaddo saamiyada illaa heer sare sida ay u socon karaan. Sidaas, halka Biyaha madow: Abyss wuxuu leeyahay horudhac xiiso leh oo ballan qaadaya khatar badan, ficilka iyo cabsida ay qabaan yaxaasyada cadaawayaashooda ayaa u janjeera
Diiradda ugu weyn ee shirqoolka ayaa inta badan ku dhaca jilayaasha cilladaha badan iyo dagaalada sida ay ugu halgamayaan inay noolaadaan. Taas ayaa kufiican in la buuxiyo qoto dheerta dabeecadooda, laakiin isla markaa waxay ku dhacdaa opera saabuun sida riwaayadaha. Sida ka soo kabashada Viktor ee kansarka iyo qaar ka rogan oo qalloocan oo u rogaya xiriirka jilayaasha iyo muujinta. Oo aynu wajahno xaqiiqooyinka, waxaan halkan u joognaa wuxuush, kiiskan, crocs. Sida loo duubayo filimka ma helno in badan oo ka mid ah sida aan jeclaan lahayn iyo cabsida gabi ahaanba waxtar ma leh.
Qaar ka mid ah muuqaalada aan ugu jeclahay filimka ayaa runtii ah bilowga inta lagu jiro horudhaca noocyada. Dhawr dalxiisayaal reer Japan ah (Louis Toshio Okada, Rumi Kikuchi) ayaa isku khilaafsan dibedda markii ay si shil ah ugu dhacaan nidaamyada godadka godka hoose. Waxay ka dhigtaa mid dhab ah adrenalin in kasta oo ay gaaban tahay. Filimkuna si wanaagsan ayuu uga faa'iideysanayaa daamanka sida kalsoonida wax yar oo aad aragto, ayaa cabsi leh. Qaar ka mid ah daqiiqadaha kacsan ayaa ah marka jilayaasha ay tahay inay ku dhex wareegaan biyaha la haysto, hubin goorta mid ka mid ah xayawaanadan cirifka ahi weerari doonaan.
Xaqiiqdii ma ahan mid dhulka dhigaysa, laakiin haddii aad niyadda ku hayso sheeko dhaqso ah oo ku saabsan kaamilayaal yaxaasyada iyo yaxaasyada dhulka hoostiisa ku yaal, taasi waa adiga
Biyaha Madow: Abyss wuxuu ku dhacay VOD Ogosto 7th, 2020
'Filimmada Inkaaran' Qeybta 2aad Oo Si Rasmi Ah Shaqada Uheysa Ayaa Sheegtay
'Antebellum' wuxuu ka boodi doonaa tiyaatarada gudaha, wuxuu dejinayaa Taariikhda la siidaayo PVOD